अमेरिका उड्नुअघि रहस्यमय मृत्यु – Dainik Lumbini
अमेरिका सपनाको संसार मान्दै डीभि भर्नेको लामा लस्कर देखिन्छ । त्यसमाथि आफ्नो श्रीमान नै उही भएको र उनैले अमेरिका आउन बोलाएपछि कुन चाँही श्रीमतीको त्यहाँ पुग्ने सपनाले मन प्रफुल्ल नहोला र ? त्यही अमेरिका पुग्ने सपना सजाउँदै झोला तयार पारेर बसेकी थिइन् बुटवल–१२ ढबाह टोलकी २७ वर्षीया अनिता रेग्मी । असोज २३ गते उनी अमेरिका उड्ने तयारी थियो । असोज २० गते उनले घरको आफू सुत्ने कोठाका सबै सर–सामान मिलाएर, दराजको राखन–धरान सुरक्षित पारेर उसै दिन माइतीलाई भेट्न हिंड्ने तयारी गरिरहेकी थिइन ।
ज्यानसंगै छिन्यो मंगलसुत्र
अनिताको माइती घर तिलोत्तमा–११ को होराईजन चोकमा पर्दछ । उनका बाबु रामचन्द्र रेग्मीका अनुसार असोज २० गते बिहान ११ बजेर ५८ मिनेटसम्म माइतीजनसंग अनिताले म्यासेञ्जरमा कुरा गरेकी थिइन् । ‘मम्मी (सासु आमा) अहिले बुटवल जानु भएको छ । उहाँ आएर मलाई विदाई गर्ने बित्तिकै म त्यहाँ आउँछु भनेर भनेकी थिइन् ।’–रामचन्द्रले बताए ।
‘त्यसपछि उनले १२ बजेर २ मिनेट जाँदा अमेरिकामा रहेका श्रीमानलाई म्यासेञ्जरमा– ‘बुढो मलाई माथि मम्मीले बोलाउनुभएको छ, माथि जान्छु, भनेर म्यासेञ्जरमा लेखेको मैले नै देखेको छु ।’– रामचन्द्रले भने । रामचन्द्रका अनुसार माथिल्लो तलामा किचनसहित सासु आमा बस्ने गरेकी थिइन् । माइती परिवारले छोरी त्यसको केही वेरपछि आउँछिन् भनेर बाटो कुरेर बसेका थिए । त्यस दिन १ बजेर ४७ मिनेट जाँदा त्यस घरकी एउटी महिलाले अनिताकी भाउजु निर्मण भण्डारी गैरेलाई फोन गरेर ‘भाउजु भित्र हुनुहुन्छ । ढोका लाको छ खै के भो के’ भन्दै फोन गरेको अनिताको माइती पक्षले जनाएको छ ।
लगत्तै माइती पक्षबाट सोही फोन नं. मा फोन गर्दा उनी कोठामा झुण्डिएको सुनाएपछि १६ मिनेटमै आफू त्यस घरमा पुगेको रामचन्द्रले बताए । ‘ढोका खुल्लै थियो । छोरी झुण्डिएको तल भुँईमा मंगलसुत्र छिनेर यत्रतत्र छरिएको देखें । कुर्सीलगायतका सर–समान पनि भुँईमा खसेका थिए ।
माथि पंखामा बाँधिएको डोरी गलामा कसिएको डोरी बाँधिएको प्रकृति पनि फरक थिए । यसले गर्दा मेरी छोरीलाई कुशलता पूर्वक झुण्डाएर मारिएको हाम्रो आशंका छ ।’– रामचन्द्रले भने ।
विवादको निहुँ सुनका गहना
बाबु रामचन्द्रले त्यस घरमा विवादको निहुँ सुनका गहना भएको बताउँछन् । ज्वाँईले अमेरिकामा नेपाली गहनाहरूको बेग्लै महत्व हुन्छ सबै गहना लिएर आउ भने पछि छोरीले लैजान लागेको र उनकी सासुले लैजानबाट रोक्न खोजेको विषयमा विवाद चर्केको उनको भनाइ छ । त्यसमा उनका कान्छा छोराले आमालाई साथ दिएको पाइएको रेग्मीले बताए । ‘हामीसंग म्यासेञ्जरमा कुरा गर्ने बेलासम्म छोरी एकदमै फ्रेस देखिएकी थिइन । भिडियो कलमा हामीलाई दराज बन्द गरेको, राखन धरान गरेको कोठाको दृश्य देखाइन् । आज म मेरो रूमको मिस गरे भनिन् ।’– बाबु रेग्मीले भने । छोरीको हत्या नै भएको दाबी बाबु रेग्मीको छ । आइतबार दिउँसो –‘बुहारी मार्न पाईदैन..’ जस्ता नाराबाजी गरेर ढवाहचोकमा माइतीजनले विरोध प्रदर्शन गरे । प्रहरीले आत्महत्या दुरूसाहन मुद्दामा अनिताकी सासु शान्त खनाल र देवर मदन खनाललाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
प्लेनको टिकट र गाडी बुकिङ बित्थै बन्यो
बाबु रामचन्द्रले छोरी माइती आएपछि अर्को दिन कार्तिक २१ गते छिमेकका सबै आफन्तहरूलाई भेटघाट गर्ने, २२ गते बिहानै मनकामना दर्शन गरेर काठमाडांै जानका लागि स्कारपियो गाडी बुकिङ गरिसकेको बताए । अर्को दिन २३ गते दिउँसो त्यहाँ किनमेल गरेर साँझ साढे ८ बजेको फ्लाईटमा उड्ने गरी कतार एअरलाईन्सको टिकट लिइसकेको उनले बताए । बाग्लुङ्गको निसीखोला गाउँपालिका–४ झिवाँखोला बजारमा पुख्र्याैली घर भएका रेग्मी परिवारका दुई छोरा, दुई छोरीमध्ये अनिता जेठी छोरी थिइन् । स्टाफ नर्स पढेकी उनी विवाह अघिसम्म मणिग्रामको क्रिमशन अस्पतालमा जागिरे थिइन् । डीभी परेर अमेरिका पुगेका उनका श्रीमान सुमन खनालसंग २०७५ साल माघ ४ गते विवाह भएको थियो ।
विवाह गरेर अमेरिका हिंडेका उनी त्यसको एक वर्षपछि घर आइ करिव दुई महिना बसेर अमेरिका फर्किएका थिए ।
काम अनुसार दाम पाउँदैनन् नर्स
पाल्पामा पहिरोले पुरिदा एक जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता